०७८ साल जेष्ठ २३ गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ ! – List Khabar
Home / राशिफल / ०७८ साल जेष्ठ २३ गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
०७८ साल जेष्ठ २३ गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
admin2weeks ago राशिफल Leaveacomment 215 Views
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २३ गते आइतबार, इश्वी सन २०२१ जुन ५ तारीख जेठ कृष्णपक्ष दशमी तिथी पश्चात एकादशी तिथी रेवती नक्षत्र आयुष्मान योग पश्चात सौभाग्य योग वणिज करण चन्द्रमां मिन राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु विश्व वातावरण दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापारबाट राम्रै आम्दानी हुन सक्छ । नसोचेको काम बन्ने योग छ, अनौठो समाचार पनि सुनिएला । अर्थ लाभका अवसर आउने छन् । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सकिनेछ । यात्रामा विशेष लाभ होला, दिन सामान्य नै छ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । जीवनसाथी र आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) आज आर्थिक संकट पनि आउनेछ । लेनदेनमा विवाद पनि बढ्नेछ । घरायसी समस्या पनि आउला । पढाइ लेखाइमा ध्यान दिन नसकिएला । साथै, रुपैँया पैसाको पनि नाश हुने दिन छ, विचार गर्नुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) गलत विचारहरुले काममा बाधा सिर्जना गर्ने छ । अरुको काम धेरै गर्नु पर्ला । समयको बचत कम हुने दिन छ । नोकरी तथा राजनितीमा मान सम्मान पाउने योग छ । अरुको मन जित्न सकिने छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) दाम्पत्य सम्बन्ध सुखद रहनेछ । प्रेमको बन्धनमा बाँधिने दिन छ । पैसा लेनदेनको काम पनि होला । सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन् ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ । व्यापारमा मनग्ये धन लाभ हुनेछ । साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग गर्लान तर आफन्तको सहयोग चाहि नपाइएला ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) लेनदेनको समस्याले सताउनेछ । शत्रु पनि बढ्ने छन् । ब्यापारमा घाटा बेहोर्नु पर्ला । कृषि, पशुपालन र सानातिना घरायसी काममा समय खर्च हुनेछ । यात्रामा सावधान रहनु होला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) पढाइमा सुधार आउने योग छ । कुरा काट्नेहरु प्रशंसक बन्नेछन् । जागीरबाट पनि सन्तुष्टी मिल्ने देखिन्छ । काममा समस्याको सामाना गर्नु पर्ला । गलत लेनदेनमा समस्या आउन सक्ने छ । जागिरमा सम्मान पाइनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ । आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुन पाइनेछ । मनमा हौसला बढ्नेछ । पराक्रम बढनुको साथै अधुरा काम बन्ने छ । त्यसै त्यसै मन हर्षित भएर आउनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य सुखको योग छ । स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउने छ । आयआर्जनको स्रोत फेला पर्ला । सामान्यतया लाभ हुने नै दिन छ, तर कृषिजन्य पेसा वा व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिंदैन ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) समय राम्रो भएपनि आज खर्च बढ्ने, विबाद बढ्ने तथा शत्रुले सताउने योग छ, सावधान रहनु होला । खर्च बढ्ने, गलत विचार बढ्ने, विबाद बढ्ने र काममा अवरोध आउनाले धनको नाश हुन सक्छ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) शैक्षिक प्रगतिका लागि अनुकूल समय आएको छ । पठन पाठनमा ध्यान दिनु बेस हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध बलियो रहनेछ । अधुरा कामहरु बन्ने तथा अरुको विश्वास आफुतिर रहने, आफन्तहरुको उचित सहयोग मिल्ने छ ।
Previous निर्देशक दीपाश्रीसंगै निरौला पल शाह र अभिनेता पुष्प ख’ड्काले गरे वृक्षरोपण
Next ट्याक्सी चालक कर्णराजको अर्को सफलता, सुरक्षा र सागरलाई हराउदै पुगे लाईभ शो मा ।